CAYAYAANKA OO LA YAREEYO: SAWIR, WAXA CAYAYAANKA U MUUQDA SIDA HOOSTA MIKROSKOOBKA, WAA MAXAY CABBIRKA CAYAYAANKA, CALAAMADAHA ASTAAMAHA LAGU OGAADO MAQAARKA? - BEER CAGAARAN
Cayayaanka qasac ah waa wakiil microscopic ah ee xayawaanka adduunka aan la geli karin indhaha aadanaha. Nafaqada habboon ee taranku waa mugdi madow iyo calool-xumo, inta badan ka mid ah boodhka, iyo hoyga ugu wayn waa hoyga dadka.
Cayayaanka ugu horreeya ee boodhka ah ayaa laga helay guryaha dhowr boqol oo sano ka hor. Waxaa la aaminsan yahay in la keenay baalasha iyo digaagga. Cayayaanka fuuqbaxu waa ciladaha keena cudur halis ah - neefta neefta.
Laga soo bilaabo maqaalka, waxaad baran doontaa astaamaha qaniinyada boodhka ah ee ay sababaan, sida ay u egyihiin jirka bini-aadanka, waxayna fiirin karaan sawirka cayayaanka ee hoosta mikroskoobo.
Sharax kooban oo cayayaanka
Sayniska wuxuu leeyahay in ka badan 150 nooc oo ah cayayaanka boodhka ah. Kuwa ugu caansan waa noocyada pyroglyphid iyo noocyada barnaanta, kuwaas oo lagu sifeeyay inay yihiin tuubada guriga.
Cunto-shakhsiyaadkaas - unugyada dhintay ee epidermis, ka soo dhacaya maqaarka bini-aadamka, qayb ka mid ah xannibaadda, iyo sidoo kale khaanad suufka suufka, bustayaal, rooga. Waxay doorbidaan inay hab nololeedkooda ku qabtaan xagasha boodhka ee guriga, dhar-duubka dharka gaboobay, joodariyeyaasha, alaabta guriga lagu rido, roogagga ...
Waxay dareemaan weyn 55% ama kabadan qoyaanka qolka iyo heerkulka hawada ee 22 - 26 ° C. Laba bilood ayaa ku filan baqtigaan si ay u dhigaan farcanada dhowr ukumo daraasiin ah. Laakiin wareeggii nolosha ee qofku uusan soconin - ilaa saddex bilood.
Cabbirka mid ka mid ah tijaabada waa 0.1 mm, laakiin noocyada qaar ayaa gaari kara 0.5 mm. Hal garaam oo boodh ah ayaa ku noolaan kara boqol boqol oo caaradood oo budo ah.
Cayayaanka aan la garan karin lama ogaan karo oo la arki karo ilayska caadiga ah. Hase yeeshee hoosta muraayada ama muraayada weyn, shakhsi qaangaar ah ayaa u muuqda cabsi. Muujinteeda waxay u egtahay dabayl huruud ah-caleemo leh oo leh siddeed sharo oo fiiqan, mid kasta oo ka mid ah waxa ku jira nuugida si uu u hayo kubka dusha sare. Pincers si adag ayay u xajinayaan boogahooda si ay u sheyaan in aysan suurtogal ahayn in ay dharkooda ama sariirta u tuuraan xitaa adigoo ruxaya xoog leh. Vacuum ee la dagaallanka xayawaankan sida aan awood lahayn.
Ma qaniinaan? Cayayaanka baayacmushtari waa kuwo aad u yaryar oo aan qofku dareemin in ay jidhka joogaan oo ay dareemayaan qaniinyada. Halista kaliya ee xayawaankani waa tan oo leh xoojin balaadhan, waxay awood u leeyihiin inay keenaan xasaasiyad bani'aadanimo ah oo bini'aadamka ah.
Haddii aad xasaasiyad u leedahay qaniinyada, ha ku nadiifin meelaha meelaha burburay, si looga fogaado in maqaarka loo sii daayo meelo kale.
Meelaha ay dhibaatadu saameysey waa in isla markiiba lagu daaweeyaa saabuun ama soodhadh, sidoo kale antiseptic.
Si loo yareeyo cuncunka iyo isticmaalka caabuqa:
saliida muhiimka ah ee loo isticmaalo qoryaha, qoryaha, qandhada, naasaha, qoryaha;
bakeeriyada shaaha madow ama cagaaran oo cusub oo diyaarsan;
Waxaad cabbi kartaa kiniinno yar oo dhuxul leh.
DAREEN! Daawooyinka la soo jeediyey waxay leeyihiin saameyn jilicsan maqaarka, yareeya cuncunka, laakiin ha daaweyn calaamadaha xasaasiyadda.
Daaweyn, waxaad u baahan tahay inaad booqato dhakhtar oo aad cabto daawo daaweyn ah. Waxaa ka mid ah daroogooyinka ugu wax ku oolka badan:
Marka xigta waxaad arki kartaa sawirka qaniinyada jidhka bini'aadamka, iyo sidoo kale sida cayayaanka u ekaado hoosta mikroskoobka.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo ogaado.
Aqalka si aad u hesho caarada boodhka waa dhibaato. Sababtoo ah cabbirkooda microscopic, waa suurtagal inaan aragno, laakiin xayawaankani waxay ku noolyihiin meelo kala duwan meel kasta oo ay dadku ku nool yihiin. Haddii qofku aanu lahayn xasaasiyad xasaasiyadeed, waxay u badan tahay in xooga saarista shilinta gurigiisa uu yaryahay. Mulkiiluhu maaha xitaa inuu ka warqabo jiritaanka duleelahan gurigiisa. Haddii wax falcelin aan caadi aheyn oo jirka ka muuqda si ay u muuqdaan boodhka muuqda, waxaa loo qaadan karaa in martida aan la socon ee ku nool guriga.
Haddii aad ka shakisan tahay jiritaanka ku dul-noolaanshaha guriga, waxaad iibsan kartaa tijaabo gaar ah farmashiyaha - cirbadaha si sahlan u ogaan kara caarada caarada caarada iyo si loo ogaado lambarkooda. Intaa waxaa dheer, waxaad ku martiqaadi kartaa koox khaas ah oo ku hawlan la dagaalanka dulinka. Khabiirada waxay qaadan doonaan shaybaaro boodh iyo, haddii ay dhacdo in la ogaado dulin, waxay sameyn doonaan jeermis dhamaystiran ee guriga.
Qofka qaniinyada dhulka ku jira wuxuu ogaan karaa bararka iyo guduudka qaabka hargabka, waxaa jira cuncun aan loo dulqaadan karin oo ah meelaha ay dhibaatadu saameysey. Xasaasiyadda xasaasiga ah waxay leedahay indho cas iyo madax xanuun, iyo dareemid daal.
Caawin! Ka dib muuqaalka jidhka ee qaniinyada maqaarka, qofka cirridka sanka ayaa soo baxaya, wuxuu bilaabaa inuu hindhisto sabab aan jirin, waxaa jira dareen gubasho oo ku dhaca sinaha, marar badanna cunaha.
Qaniinyada suntu waxay ku dari kartaa dareen-celinta xasaasiyadeed waxay ka qayb qaadan kartaa muujinta:
caabuqa xuubka xuubka iyo caleemaha;
Haddii aad hesho caarada boodhka ee gurigaaga, waa inaad codsataa tallaabooyinka soo socda si aad u disho:
Nadiifinta qoyan ee joogtada ah ee qolka leh saline ama saliid.
Qolalka hawo-qaadista, oo ay ku jiraan adoo dejinaya daboolka.
Qalitaanka gogosha iyo qolofada.
Qoob-ka-soo-saarka dhirta gudaha waxaa loo tixgeliyaa daaweyn wanaagsan oo ka soo horjeeda dul-saaridda dulinka. kaasoo si wax ku ool ah uga qaadaya boodhka hawada: Chlorophytum, dhirta caagga ah, geranium, spathiphyllum.
Intaas waxaa dheer, waa inaad iibsataa mid ka mid ah kiimikooyinka soo socda ee farmashiyaha:
Wax kasta oo lagu buufiyo anti-xasaasiyadeed. Farsamaynta waxaa lagu fuliyaa dhammaan meelaha adag, oo ay adagtahay in la raaco tilmaamaha iyo tallaabooyinka taxaddar leh.
Shampoos gaar ah. Waxaa lagu daraa biyaha marka la nadiifiyo sagxadaha iyo nadiifinta roogagga.
Ka joojinta. Waxaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daray marka la dhaqayo waxyaabo.
Xayawaanku waxay si fudud u qabsadaan xaaladaha nololeed ee wanaagsan ee guryaha. Waxaad la noolaan kartaa iyaga muddo sanado ah mana waligin jiritaanka jirkooda. Laakiin haddii aad xasaasiyad u leedahay cayayaanka, waa lagama maarmaan in la sameeyo nadiifinta guriga oo dhan iyo cabitaanka daawooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago calaamadaha xasaasiyadda.